TOKYO OTA OPERA PROJECT2020 | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Ota Ward Cultural Promotion Association yanga ichiita chirongwa chemakore matatu opera kubvira 2019.
Mugore rechipiri, isu tichaisa pfungwa pa <vocal music>, inova zvakare huru sisitimu ye opera, uye nekuvandudza hunyanzvi hwekuimba.Isu tichapokanawo mitauro yekutanga yea opera yega (Italian, French, German).Mukuita chaiko, pamwe nevaimbi vane mukurumbira veopera, tichaimba pamwe nekurira kweorchestra muAplico Grand Hall.
Tiri kutarisira kutora chikamu kwevaya vanoda kunakidzwa nenyika yeopera zvakanyanya.
* Kuita kwacho kwakamiswa kudzivirira hutachiona hutsva hwecoronavirus.Bhizinesi racho rakachinjirwa kugoverwa pamhepo.
Dzvanya apa kuti uwane pepa rePDF
Murongi: Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Grant: General Inopindirwa Nharaunda Dunhu Rekusika
Kugadzira kudyidzana: Toji Art Garden Co., Ltd.
"TOKYO OTA OPERA PROJECT + @ HOME" chirongwa che opera chakanangana nemararamiro matsva.
Kuita kwacho kwakadzoserwa kuna 2021 kudzivirira hutachiona hutsva hwemakona, asi makosi epamhepo (kakapetwa kagumi nekamwe) akaitirwa nhengo dzemakwaya.
Uye zvakare, kubva kuchishuwo chekuendesa yakanaka opera arias kune wese munhu kuburikidza nevhidhiyo, isu tichaendesa opera (petit) gala konzati pamwe nekubatana kwevaviri vanoimba pamwe nevairidza piano avo vakarongerwa kuoneka gore rino.
Ndokumbirawo unakirwe!Vhidhiyo yacho ichagadziriswa nguva nenguva!
Opera (Petit) Gala Concert (nziyo shanu dzese) (Yakaburitswa munaNovember 5, 2020)
EW Korngold: Kubva pane opera "Guta rerufu" "Kushuva kwangu, kufungidzira muzviroto (rwiyo rwaPierrot)" (yakaburitswa Mbudzi 2020, 11)
G. Bizay: "Habanera" kubva kuopera "Carmen" (yakaburitswa Mbudzi 2020, 11)
GA Rossini: "Ndini iye" kubva kune opera "Iyo Barber yeSeville" (yakaburitswa Mbudzi 2020, 11)
J. Strauss II: "Ini ndinoda kukoka vatengi" kubva kune anoshanda "Die Fledermaus" (yakaburitswa munaNovember 2020, 11)
Mozart: "Oira musungo weshiri" kubva kune opera "Iyo Yemafiriti Flute" (yakaburitswa Gumiguru 2020, 10)
[3 hurukuro] Rwendo rwekutsvaga opera
Mukupindura mamiriro ekukurumidzira akaburitswa muna Ndira 3, gore rechitatu reReiwa uye nechikumbiro kubva kuOta Ward, kosi iyi ichachinja nguva yekutanga etc.
Kutanga (kuvhura) XNUMX:XNUMX (XNUMX:XNUMX) Yakarongwa nguva yekupedzisira XNUMX:XNUMX
* Huwandu hwevashanyi kukosi iyi hwakaganhurirwa kuXNUMX% yeanogona, uye ichaitwa nguva dzese dzezvigaro.
* Mari yetikiti ichadzoserwa kune avo vanoshuvira nekuda kweshanduko munguva yekutanga.Vatengi vematiketi vanozoziviswa nezve izvo ruzivo neemail kana hamvuropu.
Opera yakatanga sei uye yakatanga sei?
Iyi ndiyo kosi iwe yaunogona kuwana ruzivo rutsva rwe "opera" uye "hunyanzvi" nekutsvagisa mutsika dzeEuropean uye tsika yeViennese, iyo yakatanga kubva kumaopereta.
Mudzidzisi achange ari Toshihiko Uraku, uyo achaburitsa nyika yehunyanzvi kubva pane inonakidza maonero, senge "Sei Franz Akanyora vakadzi vasina simba?" Uye "138 mabhiriyoni emakore enhoroondo yemumhanzi."
© Tora Hwepasi Niitsubo
Munyori, mutsika wenyanzvi.Inoshanda seyakagadzirwa tsika tsika mugadziri anobva kuParisMushure mekudzokera kuJapan, mushure mekushanda semukuru maneja weShirakawa Hall, Shirakawa Hall, parizvino ndiye mumiriri wehofisi yaToshihiko Uraku.Ane zviitiko zvakasiyana siyana, zvinosanganisira mumiriri director weEuropean Japanese Art Foundation, mukuru weDaikanyama Future Music School, director director weSalamanca Hall, uye chipangamazano mutsika weMishima City.Mabhuku ake anosanganisira "Nei Franz Liszt Akatadza Vakadzi", "Violinist Anonzi Dhiyabhorosi" (Shinchosha), uye "Nhoroondo Yemimhanzi ye138 Bhiriyoni Makore" (Kodansha). MunaJune 2020, iyo Korean vhezheni ye "Nei Franz Liszt-Nei Franz Liszt-Kuberekwa kwePianist" yakaburitswa muSouth Korea.
Kosi yezvinyorwa [Nzvimbo / Ota Ward Hall / Aprico Diki Horo (B1F)]
Yekutanga "Kuongorora nhoroondo ye opera"
Kutanga zuva / Ndira 2021, 1 (Chishanu)　19:00 kutanga (18:30 yakavhurika)　17:30 kutanga (17:00 yakavhurika)
Nhoroondo ye opera inopfuura ingori nhoroondo yemumhanzi mutambo. Opera, iyo etymology iri "basa," mucherechedzo wevamiriri nesimba, uye zvakare iri "basa" retsika dzekuMadokero senge mabhuku, hunyanzvi, kuvaka, uye theatre.Tichaendesa nhoroondo ye opera, iyo inogona kunzi inhoroondo yeEurope pachayo, nenzira iri nyore kunzwisisa uye yakasimba.
2nd "Mberi uye Kudzoka Kwekunaka tsika dzeEuropean"
Kutanga zuva / Ndira 2021, 2 (Chishanu)　19:00 kutanga (18:30 yakavhurika)　17:30 kutanga (17:00 yakavhurika)
Kana yakaisvonaka yedare opera yeImba yeVersailles yaive tsika yepamberi, ingadai imba yamambo yakanga isina chimbuzi?Zvinogona kutaurwa kuti ndiyo tsika iri kumashure kwezviitiko.Iko Phantom yeOpera iyo yakazunungusa guta raivapo zvechokwadi here?Mune ino magazini, isu tichakuzivisa iwe kune inoshamisa nhoroondo yeEuropean kumashure tsika.
Yechitatu "Chakavanzika cheViennese tsika?"
Kutanga zuva / Ndira 2021, 3 (Chishanu)　19:00 kutanga (18:30 yakavhurika)　17:30 kutanga (17:00 yakavhurika)
Nei Vienna yakanzi Guta reMimhanzi?Chii chiri chinokwezva cheVienna chakwezva vaimbi vakakurisa kunge magineti?Uye ndeipi mamiriro ekuzvarwa kweyekunakidza opera yakasarudzika kune rino guta rinonzi Winna Operetta?Chakavanzika chemavara uye akanaka tsika dzeViennese.
Vatengi vanoshuvira kuenda kunzvimbo iyi
Tenga matikiti epamhepo
Online pre-kutengesa zuva: Zvita 12 (Sat) 12: 12 ~
Zuva rekuburitsa General: Zvita 12 (Chitatu) 16: 10 ~
Kutenga tikitiPanoNdokumbira utarise kune iyo.
Mutengo (mutero unosanganisirwa)
Zvigaro zvese zvakachengeterwa * Vadzidzi vekuchikoro havabvumidzwe
Imwe-yenguva tikiti chiuru yen (mutengo wepamhepo: 1 yen)
3-nguva yakatarwa tikiti 2,700 yen (online mutengo: 2,560 yen)
Vatengi vanoshuvira kuenda kurekodhwa kurekodhwa
Notification yekushandurwa muhupenyu hwekuparadzira uye nzira dzekuona, nezvimwe.
Iyi kosi yanga yakarongerwa kuunzwa zviripo pazuva rekuvhura, asi nekuda kwemamiriro ezvinhu akasiyana siyana, isu tafunga kuichinja kuti ive yekurekodha kuendesa.
Tinokumbira ruregerero nekukanganisa, asi ndokumbira utarise zvinotevera kuitira nzira yekutenga uye zuva rekuburitsa.
Dzvanya apa kuti uwane zvakarekodhwa nekuparadzirwa